Ahoana ny fomba hitsaboana otitis canine | Tontolo alika
Ny volontsika dia mety hisy fiantraikany amin'ny andiana aretina mandritra ny androm-piainany, iray amin'ireo otitis mahazatra indrindra. Noho izany, raha tsikaritray fa mamoaka fofona tsy mahafinaritra izy io, manafina ny vongan-tsofina betsaka noho ny mahazatra ary manimba azy matetika, dia tsy maintsy mandray fepetra maromaro isika mba ho salama tsara indray ny sofin'ny sofiny.
Noho io antony io dia holazainay aminao ny fomba hitsaboana otitis canine. Aza adino izany.
Raha miahiahy ianao fa voan'ny otitis ny alikanao, zava-dehibe ny hitondranao azy haingana any amin'ny vet mba tsy hiharatsy azy. Rehefa tonga eo, dia hozahan'izy ireo ianao hahalalanao ny antony nahatonga azy io (ny fahita matetika dia ny farantsakely, toy ny Otodectes cynotis, fa io koa dia mety ateraky ny allergy, vatana avy any ivelany, aretina viral na auto-immune, neoplasma na aretim-pivalanana) hanome anao fitsaboana izy ireo.
Miankina amin'ny antony, mety mila antibiotika ianao na manadio ny sofinao amin'ny vongan-dranomaso manokana izay hatolotr'ilay matihanina. Tsy maintsy manaraka ny torohevitra omeko anao ianao amin'ny faran'ny taratasy, satria ny sofina dia faritra marefo amin'ny vatana, ary raha lasa lalina loatra izy io dia mety hiteraka fahasimbana be amin'ilay alika. Noho izany, raha mahazo ny mason'ny maso ianao dia tsy tokony hanadio mihoatra ny hitanao. Ity lahatsoratra ity Izy io dia mety ho torolàlana hahafantarana ny fanadiovana ny sofin'ilay namanao.
Mba hanesorana ny savoka amin'ny vala dia ampiasao ny gauze teo aloha izay nasiana vongan-dranomaso vitsivitsy, ary esory tsara. Raha mitebiteby izy na maharary dia mijanoa ary milalao kely aminy. Amin'ity fomba ity dia azonao antoka fa, amin'ny manaraka tsy maintsy itondranao azy io, dia tsy mahazo aina izany.
Ny otitis Canine dia aretina izay mitaky fotoana maharitra hanasitranana, ary matetika miseho indray izy io, noho izany dia ampirisihina mafy ny hitondra ilay alika volo any amin'ny mpitsabo biby isaky ny enim-bolana mba hisorohana ny delestazy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » aretina » Ny fomba hitsaboana otitis canine
Torohevitra tsara hitahirizana ny alikao amin'ny andron'ny mpifankatia